နံရံကပျကျွွောငာ 12.07.2018 24.07.2018 interesnenkoe, Красота, ပုံ
နွေရာသီ - ကသင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှူခွင့်အဝတ်အစားများနိမ့်ဆုံးဝတ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်အခါသာအချိန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ပင်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်များစွာသောမိန်းမတို့သည်မိမိအရုံဖက်ရှင်ထဲကမလာကြဘူးသောအရာ၏ပုံရိပ်နှင့်ဆန့်ကျင်ပွတ်တိုက်မှုသံမဏိလုယူမှစီမံခန့်ခွဲ။ ယခုပင်လျှင်တစ်ဝက်အောင်မြင်ပြီးနွေရာသီ, လမ်း၌ သင်ဆဲ 2007-2010 နှစ်ပေါင်း odes ဖက်ရှင်မနာသီချင်းဆိုသောမိန်းမတို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သူ၏အသက်အရွယ်ထက်အများကြီးအသက်ကြီးကြည့်ရှုပါ။
ဖက်ရှင်သိသိဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တစ်နေရာရာယခုရာသီပူးတွဲရန်ခက်ခဲကြောင်းအမှုအရာရှိပါသည်။ ထုတ်ဝေ "ဒါကြောင့်လွယ်ကူ!" ဝေးသောကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအဘို့အရွှေ့ဆိုင်းဖို့လိုအရာဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးစတိုင်အဘို့နှင့် ခေတ်မှီနွေရာသီကြည့် အသစ်သောအဝတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါမဟုတ်, ဗီရိုထဲမှာသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့လုံလောက်တဲ့။
အနိမ့်-ပစ်လွှတ်နှင့်အတူ Ultrashort ဘောင်းဘီတို ဖက်ရှင်ထဲက ပြီးသားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း5။ သူတို့ဟာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်အားလုံးအရွယ်အစား၏အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြသည်။ ဤပုံစံကိုမကြာခဏအောက်တန်းကြည့်သူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်အနာအဆာများနှင့်ကိန်းဂဏန်းပေးပါသည်။ အရမ်းပူပြင်းတဲ့ကြော့နှင့်မ - ဒါဟာဘောင်းဘီတိုမြင့်မားသောခါးနှင့်အတူအခမဲ့ဖြတ်ဝတ်ဆင်ရန် သာ. ကောင်း၏။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ, ဒါပေမယ့်လည်းပေါ့ပါးအင်္ကျီနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့မသာအကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားအဝတ်နှင့်ဆင်မြန်းပွင့်လင်း2လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလုံးကိုရွေးကောက်ပွဲရှိကြ၏။ သို့သော်ကြောင့်ဤအရာတို့ကိုအတူလမ်းများပေါ်တွင်ပုံရိပ်များ၏ overabundance ရန်, 2018-မီတာအတွက်သူတို့အလိုအလြောကျ antitrend သို့လှည့်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်သောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အသက်ရှူဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ပိတ်ချောကိုဖန်ဆင်းသောအရာတို့ကို၎င်း, preference ကိုပေးဖို့အချိန်ပါပဲ။
အတူတကွဗီရိုထဲကနေအလွန်တိုတောင်းသောဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူတစ်သျှူးထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်အရာအပေါက်, အဂျင်းဘောင်းဘီကိုဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးရာစုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလုံခြုံစွာတိုင်းပြည်အတွက်လမ်းလျှောက်အဘို့ထိုသူတို့သုံးနိုငျ, ဒါပေမဲ့သူတို့နေ့စဉ်အသက်အဘို့အသင့်လျော်မရှိကြပေ။ Little ကတိုက် - ဒီဂန္ဖြစ်ပါသည်, သို့ရာတွင်သူ၏ဒူးပျေါတွင်းနှင့်ဖြတ်တောက်မှုအတိတ်နစ်မြုပ်။ ယခုပင်လျှင် 3-ကြိမ်မြောက်တစ်နှစ်မြင့်မားသောထိုင်ခုံအနေအထားနှင့်အတူအခမဲ့ဖြတ်ဖက်ရှင်-အရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ၌တည်၏။
ပြင်သစ်ကျေးလက်၏ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်းအင်္ကျီနှင့်ရှင်းလင်းသောပခုံးနှင့်အတူရပ်တည်, လွန်းသောကြောင့်ဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဖက်ရှင်ခဲ့ပေမယ့်ဒီအရာ၏ဘုန်းအသရေရက်ပေါင်းလွန်။ သူတို့ဟာအမြဲကမ်းခြေမှာသင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီရာသီတစ်စတိုင်မြို့ပြလမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောမရှိကြပေ။ နောက်ထပ်အရာအင်္ကျီများနှင့်ဥပမာတစျခုပခုံးကိုကျော်အချိုးမညီဖြတ်, ထိပ်ဆုံးမှ။
အတွင်းခံအဝတ်အစား၏ပုံစံအတွက်ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွနှင့်ထိပ်၏ပုံစံဝတ်စုံကိုလည်းဒီ list များတွင်ပါဝင်သည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲ vilified နှင့်လုံလောက်စွာပါပဲ။ သင်က neckline မှာဇာနှင့်အတူဖဲသို့မဟုတ် velor လုပ်ထားတဲ့ထိပ်ဝတ်ဆင်ရန်ရှိသည်မဟုတ်သငျ့သညျ။ လုံလောက်စွာသူတို့ကိုအစားထိုးရန်များစွာကိုအခြေခံအမှုအရာရှိပါသည်။ သငျသညျခဲတံစကတ်နှင့်ဤထိပ်မပါဘဲအကြံအစည်သင့်ရဲ့လမ်းမဟုတျပါဒါရှိလျှင်, ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွစတိုင်မှာရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းကြောင်းဇာနှင့် pugovichek မပါဘဲပိုး (ဖဲ) ၏ထိပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ယခင်ကဤအဆင်တန်ဆာဖက်ရှင်ခဲ့ကြသည်သွားရမည်အကြောင်း, ယခုဖွင့်ထားတဲ့မသင့်လျော်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပါပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, လူအပေါင်းတို့သည် stylist သူတို့ကို antitrendov စာရင်းလုပ်, ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေသူတို့ကိုဝယ်ဝတ်ဖို့ဆက်လက်။ သငျသညျလည်ပင်းအလေးပေးပြောကြားလိုလျှင်ရှည်လျားသောပုတီးပေါ်တွင်တင်သော်လည်း, သင်သည်ခေတ်မှီကိုကြည့်ချင်လျှင်, တဦးတည်း။
ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်နဲ့လှန်လာသောသေတ္တာအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်ကိုအယှက်မယ်လို့ဘယ်သူမျှမကပိုပြီးဖိနပ်။ ကမ်းခြေဒါမှမဟုတ်ရေကူးကန် - ရှေ့ဆက်။ ဒါပေမယ့်မြို့သူတို့အထဲသို့သွားကြဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျတိုင်းအရသာကိုက်ညီဖို့ရှေးခယျြနိုငျအောငျအခုဖက်ရှင်ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ၏ flops ။
ဖက်ရှင်ခဏပါပဲ။ options နှစ်ခုရှိပါတယ်: သင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာအပေါင်းတို့နှင့်အချိန်ကိုအချိန်လိုအပ်ချက်များကိုရန်သင့်ဗီရို adaptirueshsya, သို့မဟုတ်သင် 5-7 နှစ်ပေါင်းဝတ်ဆင်နိုင်ပြီးမစဉ်းစားကြဘူးသောဂန္အခြေခံအရာကိုရွေးဖြစ်စေ။ ဒါပေမယ့်အဓိကအရာ - ကောင်းစွာသင့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပေါ်လွင်စေသည်အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်မထိုက်မတန်လူနေမှုပုံစံစတဲ့နှငျ့သငျသက်သာခံစားရပါစေ။
← infographics: သင်2နှစ်7ကနေကလေးတွေအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ